Ɔpɛ, ɔkɔm, ne sekan (1-12)
Ɔkasa tiaa adiyifo a wɔnka nokware (13-18)
Yeremia gye toom sɛ ɔman no ayɛ bɔne (19-22)
14 Yehowa asɛm a ɛbaa Yeremia nkyɛn ni. Ɛfa osu a antɔ no ho:+ 2 Yuda redi awerɛhow,+ na n’apon agugow. Apon no ayɛ basaa, na atutu agu fam,Na wɔte nteɛm fi Yerusalem. 3 Wɔn mu atitiriw somaa wɔn nkoa* sɛ wɔnkɔ nsu mmra. Wɔkɔɔ nsubon* mu, nanso wɔannya nsu. Wɔde wɔn nhina san bae kwa. Wɔn ani awu, wɔn nsa asi fam,Na wɔakatakata wɔn ti. 4 Efisɛ asaase no apaapae,Osu a ɛntɔ asaase no so nti.+Akuafo ani awu, na wɔakatakata wɔn ti. 5 Ɔwansan a ɔwɔ wuram mpo agyaw ne mma a wawo wɔn foforo hɔ,Efisɛ sare biara nni hɔ. 6 Sare so mfurum gyinagyina nkoko a ɛso ayɛ kwabokwabo no so. Wɔtwe mframa sɛ sakraman;Nwura a wonnya nti, wɔn ani nhu ade yiye.+ 7 Yɛn ankasa bɔne di adanse tia yɛn,Nanso, O Yehowa, wo din nti yɛ ho biribi.+ Efisɛ yɛn mmarato adɔɔso,+Na wo na yɛayɛ wo bɔne. 8 O Israel anidaso ne n’amanehunu bere mu Ogyefo,+Adɛn nti na woayɛ sɛ ɔhɔho wɔ asaase yi so,Na woayɛ sɛ ɔkwantuni a ɔsoɛ baabi anadwo? 9 Adɛn nti na woayɛ sɛ ɔbarima a ne ho adwiriw no,Na woayɛ sɛ ɔsabarima a ontumi nnye ne man yi? Nso yɛn mu na wowɔ, O Yehowa,+Na wo din da yɛn so.+ Ntow yɛn nkyene. 10 Nea Yehowa aka afa ɔman yi ho ni: “Wɔpɛ akyinkyinakyinkyin;+ wɔn nan ntumi nnyina faako.+ Ɛno nti Yehowa ani nnye wɔn ho bio.+ Afei de, ɔbɛkae wɔn amumɔyɛ, na wama wɔabu wɔn bɔne ho akontaa.”+ 11 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ me sɛ: “Mmɔ mpae nsrɛ adepa mma ɔman yi.+ 12 Sɛ wɔyɛ akɔnkyen* a, merentie wɔn sufrɛ;+ sɛ wɔbɔ ɔhyew afɔre ne aduan afɔre a, m’ani rennye ho,+ na sekan ne ɔkɔm ne nsanyare a edi awu* na mede beyi wɔn afi hɔ.”+ 13 Ɛnna mekae sɛ: “O Awurade Tumfo Yehowa! Hwɛ, adiyifo no reka kyerɛ ɔman no sɛ, ‘Morenhu sekan, na ɔkɔm renka mo; na mɛma moanya asomdwoe paa wɔ ha.’”+ 14 Ɛnna Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ: “Nkɔm a ɛnyɛ nokware na adiyifo no rehyɛ wɔ me din mu.+ Mensomaa wɔn, menhyɛɛ wɔn, na me ne wɔn nkasae.+ Atoro anisoadehu ne abosonkɔm hunu ne wɔn ankasa komam nnaadaasɛm na wɔde hyɛ nkɔm kyerɛ mo.+ 15 Ɛno nti, adiyifo a mensomaa wɔn a wɔde me din hyɛ nkɔm ka sɛ sekan anaa ɔkɔm biara remma asaase yi so no, nea Yehowa aka afa wɔn ho ni: ‘Sekan ne ɔkɔm na ebekunkum saa adiyifo no.+ 16 Na nkurɔfo a adiyifo no hyɛ nkɔm kyerɛ wɔn no, wɔbɛtow wɔn agu Yerusalem mmɔnten so esiane ɔkɔm ne sekan no nti. Na obiara rensie wɔn,+ wɔne wɔn yerenom ne wɔn mma mmarima ne wɔn mma mmea nyinaa. Na mehwie mmusu a ɛfata wɔn agu wɔn so.’+ 17 “Asɛm a ka kyerɛ wɔn ni,‘Ma nisu ntene mfa m’ani ase waawaa awia ne anadwo, na mma ennnyae,+Efisɛ me man babea, ɔbaabun no, ahwe ase birim ama wabubu pasaa,+Na wapira pira bɔne. 18 Sɛ mekɔ afuw mu kɔhwɛ a,Mihu wɔn a wɔde sekan akunkum wɔn!+ Meba kurow mu nso a,Mihu nyarewa a ɔkɔm no akɔfa aba!+ Efisɛ adiyifo ne asɔfo nyinaa akokyinkyin asaase a wonnim so so.’”+ 19 Enti woapo Yuda koraa? Anaa wukyi* Sion?+ Adɛn nti na woabɔ yɛn apira yɛn na yennya ayaresa yi?+ Yɛhwɛɛ asomdwoe kwan, nanso adepa biara amma;Yɛhwɛɛ ayaresa kwan, nanso ade a ɛyɛ hu na aba!+ 20 O Yehowa, yɛagye yɛn bɔne atom,Mfomso a yɛn agyanom yɛe no nso, yɛagye atom,Efisɛ yɛayɛ wo bɔne.+ 21 Wo din nti, mpo yɛn;+Mmu w’anuonyam ahengua no animtiaa. Kae, na mmu apam a wo ne yɛn ayɛ no so.+ 22 Amanaman no abosonhunu no bi betumi ama osu atɔ anaa?Ɔsoro mpo, ɛno ankasa betumi ama osu atɔ anaa? O Yehowa yɛn Nyankopɔn, ɛnyɛ wo nko ara na wubetumi ayɛ eyinom?+ Wo na yɛde yɛn ani ato wo so,Efisɛ wo nko ara na woayɛ eyinom nyinaa.
^ Anaa “wɔn mu nkumaa.”
^ Anaa “nsuka; mmura.”
^ Anaa “wodi mmuada.”
^ Anaa “wo kra kyi.”